कोरियन चाउ-चाउहरु विश्वमै चर्चित बन्दै, विदेशमा मात्रै अरबौंको ब्यापार गर्दै कोरिया ! - Thulo khabar
कोरियन चाउ-चाउहरु विश्वमै चर्चित बन्दै, विदेशमा मात्रै अरबौंको ब्यापार गर्दै कोरिया !
सोउल : अहिले कोरियाली चाउचाउहरु विश्व वजारमै चर्चित बन्दै गइरहेका छन। पहिले पहिले विश्वका प्रमुख शहरहरु जहाँ पर्यटकहरु बाक्लो रुपमा जाने गर्दछन त्यस्ता शहरहरुमा मात्रै कोरियाका चाउचाउहरु पाउने गरेकोमा अहिले विश्वका साना
तिना शहरहरुमा समेत सजिलै पाउन थालेको छ। अहिले कोरियाका चाउचाउहरु भारत, काजकिस्तान, पाकिस्तान, रसिया तथा भियतनाममा प्रख्यात बन्दै गइरहेको छ।
ओरियन कम्पनीको चोको पाइ एशियन देशहरु चीन र भियतनाममा धेरै पहिले देखि नै प्रख्यात रहेकोमा
अहिले यो कम्पनीले अन्य स्नाक्स तथा चाउचाउहरु समेत यि देशहरुमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ। औरियन कम्पनीले टर्टल चिप्स अहिले अमेरिकाका क्यालिफोर्निया, एरिजोना, तथा कोलोराडोमा बेच्न सुरु गरेको छ। यस कम्पनीले सन २०१९ मा अमेरिकाका ३० वटा स्टोरहरुबाट बेच्न सुरु गरेको थियो।
अहिले लोट्टे कनफेक्सनरीको चोको पाई भारतमा धेरै प्रख्यात रहेको छ। चोको पाई बजारमा भारतको यसले ९० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ। भारतमा ३० देखि ४० प्रतिशत मानिसहरु भेजिटेरियन भएकाले लोट्टेले यसको प्रोडक्टहरुमा
जनावरको फ्याटको सट्टा भेजिटेबल फ्याट प्रयोग गर्ने गरेको छ। भारतमा लोट्टेको चोको पाई प्रति बक्स १ सय ५० रुपैयाँ पर्ने गरेको छ। यो मूल्य भारतिय चोको पाइको भन्दा तुलनात्मक रुपमा महङ्गो हो तर पनि लोट्टेको चोको पाई भारतमा प्रख्यात रहेको छ।
यो बर्षको पहिलो ६ महिनामा लोट्टेले आफ्नो पेपेरो चकलेट करिब १८.५ बिलियन कोरियन वन बराबरको बेचेको छ। यो बिक्री गत बर्षको यसै अवधिको तुलनामा २०.१ प्रतिशतले धेरै हो।
त्यसैगरी औरियन कम्पनिले आफ्नो ओ खाम्जा पोटेटो स्टिक चीनमा मात्रै यस बर्षको ६ महिनामा १ सय बिलियन वन वरावरको बेचिसकेको छ। यस कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्टमा टमाटर, स्टिक, मह तथा बटर र चिकेनको स्वादलाई समावेश गरी स्थानिय स्वादजस्तै बनाएपछि चीनभर यसको स्नाक्स प्रख्यात रहेको छ।-इपिएस साथी बाट